Amanzi Bath Futha Ubisi Pasterization Machine - China Qingdao Imishini esimile
I okugeza amanzi pasterization umshini wenziwe izinga okusezingeni SUS304 steel.The insimbi engagqwali anezikhala ibhande ungamandla okusezingeni eliphezulu futhi kuyaqina ongaphakeme, akulula ukuba deform kanye nokugcinwa lula. Amazinga nesivinini kuyinto adjustable ngokuvumelana ukukhiqizwa ubuchwepheshe imfuneko. Umshini ukugijima kuyinto ngokushelela. Lokhu ukukhiqizwa pasterization hhayi kuphela ngcono ukusebenza kahle inzalo kodwa futhi ukuxazulula inkinga inzalo akuphelele futhi engalingani okuyinto kubangelwa yizinga eliphansi othomathikhi. Umkhiqizo ...
Fob Inani: US $ 20000-50000
I okugeza amanzi umshini pasterization wenziwe izinga okusezingeni SUS304 steel.The insimbi engagqwali anezikhala ibhande ungamandla okusezingeni eliphezulu futhi kuyaqina ongaphakeme, akulula ukuba deform kanye nokugcinwa lula. Amazinga nesivinini kuyinto adjustable ngokuvumelana ukukhiqizwa ubuchwepheshe imfuneko. Umshini ukugijima kuyinto ngokushelela.
Lokhu ukukhiqizwa pasterization hhayi kuphela ngcono ukusebenza kahle inzalo kodwa futhi ukuxazulula inkinga inzalo akuphelele futhi engalingani okuyinto kubangelwa yizinga eliphansi othomathikhi.
Umugqa ukukhiqizwa ubamukela pasterization ubuchwepheshe. Kusebenza kuze imifino zifakwe emanzini anosawoti, ongaphakeme-lokushisa imikhiqizo inyama, soy imikhiqizo ubhontshisi yobisi, jelly nezinye ukudla kanye isiphuzo aphansi-lokushisa inzalo.
Uma amakhasimende ufuna ukupaka ngqo imikhiqizo, singakwazi ukuxhuma okuhlanzekile emoyeni omiswe umugqa kuso.
Previous: Electric noma Steam Heat Hot Air Ukudla Omiswe Machine
Okulandelayo: Inyama Ukudla Defrosted Izinsiza kusebenza
100l Kuqondile autoclave
18l Noma 23l zamazinyo autoclave
Autoclave Ukuze Ukuwafaka
Autoclave Ukuze wensimbi Steel
Autoclave ovundlile Industrial
Industrial Yamadivayisi autoclave
Autoclave Machine wamazinyo
Autoclave Nge- Ngesandla
Okuzenzakalelayo autoclave ovundlile Industrial
Ce Certificate Medical Dental autoclave Inani
Eshibhile autoclave Machine Inani
Autoclave Composite For Sale
Kumazisa ngokujulile ephathekayo Steam autoclave
Kumazisa ngokujulile Steam autoclave
Zamazinyo autoclave Uhlobo B
Zamazinyo Steam autoclave
Digital Kuqondile Uhlobo autoclave
Medical autoclave wensimbi
ubisi pa sterizer
ubisi umshini pasterization
Autoclave ephathekayo For Sale
Ephathekayo Steam autoclave
Small autoclave ephathekayo
Engagqwali wokucwebezelisa autoclave
Intuthu autoclave ephathekayo
Umshini Omiswe autoclave
Umshini wokupompa Ukuze autoclave
Kuqondile Laboratory autoclave